न बोल्न जिब्रो चल्छ न हिँड्नलाई खुट्टा, बाँसबाट बनाउँछन् अदभुत कलाकृति ! सम्मान स्वरुप सेयर गरौं - Mitho Khabar
न बोल्न जिब्रो चल्छ न हिँड्नलाई खुट्टा, बाँसबाट बनाउँछन् अदभुत कलाकृति ! सम्मान स्वरुप सेयर गरौं
June 26, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on न बोल्न जिब्रो चल्छ न हिँड्नलाई खुट्टा, बाँसबाट बनाउँछन् अदभुत कलाकृति ! सम्मान स्वरुप सेयर गरौं
रोल्पाको रुण्टीगढी गाउँपालिका अन्तर्गत होलेरी बजारदेखि करिब ३ किलोमिटर पुर्व जस्पुर गाउँ छ। त्यहाँ फरक क्षमताका ४१ वर्षीय कुल बहादुर डाँगी बस्छन् ।कुल बहादुरमा केही जन्मजात समस्या छ- बोल्नलाई जिब्रो चल्दैन । हिँड्नलाई दुबै खुट्टा पनि चल्दैनन् ।
हातको इसाराले कुराकानी गर्छन् । घस्रेर हिँड्डुल गर्छन् ।करिब ५ वर्षअघिदेखि कुल बहादुरले वास्तुकलाका विभिन्न नमूनाका साथै हस्तकलाका सामग्री निर्माण गर्दै आएका छन् । उनी बाँसबाटै विभिन्न किसिमका सुन्दर घरहरु, मन्दिरहरु, हवाईजहाँज, मानिस, चराहरु लगायतका कला-कृतिहरु निर्माण गर्न सक्छन् ।
आजकाल म’सल्स बनाउन र तौल कम गर्ने डा’इट प्लानमा मानिसहरु प्रोटिन स’प्लिमेन्टको रुपमा खानामा सोयाबीन समावेश गर्ने गर्छन् । यसलाई दैनिक खाने पनि गर्छन् । सोयाबीनमा दुध, अण्डा र मासुमा भन्दा धेरै प्रोटिन पाइन्छ ।तर ए’मिनो ए’सिड, क्या’ल्सियम र फा’इबरले भरपुर सो’याबीन थुप्रैका लागि हा’निकारक पनि हुनसक्छ ।
हा’इपरटेन्शनदेखि मृ’गौलासम्मको रो’गलाई यसले थप वृद्धि गर्नसक्छ ।भारतकी डा’इटिशियन एवं न्यू’ट्रिशियन ए’क्सपर्ट ज्योती शर्माका अनुसार सो’याबीनबाट हुने ए’लर्जी गहुँका उत्पादन (ग्लू’टेनको ए’लर्जी) बाट हुने ए’लर्जीको तुलनामा धेरै हुन्छ । केही रो’ग भएका व्यक्तिले यसको सेव’न गरे थप स’मस्या नि’म्त्याउन सक्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं-; यदि तपाईंलाई कुनै प्रकारको मुटु रो’ग छ भने सो’याबीन नखानुहोस् ।
गर्भावस्थाको ९ महिना : यी महिनाहरुमा यो यो कुरा गर्नै पर्छ